Jwxo-shiil oo la Xaqiijinayo in uu Isbtitaal ku Jiro – Rasaasa News
Sep 15, 2009 Jwxo-shiil
Xaalada caafimaad ee Jwxo-shiil oo aad looga dayrinayo, iyada oo in muddo ah ay xaaladiisa caafimaad qarsoodi ahayd, waxaa ay warar aan la shaacin sheegayaan in uu aad u Il daran yahay, waxaa kale oo uu jaho wareer ka dhex taagan yahay kooxdii uu madaxda u ahaa, oo aan amar kala qaadan tan iyo intii ay ogaadeen xaalada caafimaad xumo ee Jwxo-shiil.
Warar xog ogaal ah [leaked information] oo naga soo gaadhay dalka Ingriiska gaar ahaana magaalada London, ayaa waxay xaqiijinayaan in uu Jwxo-shiil ku jiro Isbitaal la yidhaahdo Charing Cross oo ku yaal London, halkaas oo lagu daaweynayo muddo dhawr todobaad ah.
Sidii aanu war hore ku sheegnay waxaa ku soo booday Jwxo-shiil wadna xanuun [stroke], isaga oo xiligaas joogay dalka Eritrea, waxaana la geeyey Isbitaal Milatari oo Eritrea ah, halkaas oo ay dhakhaatiirta Eritrea isku dayeen in ay daaweeyaan, balse ay waxba ka qaban waayeen xanuunka haya.
Jwxo-shiil waxaa si dhakhso ah loogu soo qaaday dalka Ingriiska, oo ah dalka uu dhalashada ka haysto, kolkii uu soo degay waxaa la geeyey gurigiisa maadaama uu dalka muddo ka maqnaa ayey qoyskiisu ka cabsadeen in ay su,aali kaga timaado. Maalin ka dib ayaa Ambalaas loogu yeedhay waxaana la geeyey Isbitaalka weyn ee Ealing [Ealing Hospital NHS Trust], halkaas oo markuu hal todobaad ku jiray loo badalay Isbitaalka [Charing Cross Hospital] oo lagu daweynayo. Halkaas oo ay isku badbadalaan wiil uu adeer u yahay oo la yidhaahdo Fu,ad Cali Cumar iyo wiil gabadhiisa qaba oo la yidhaahdo Maxamed Xirsi.
Xanuunkan ayaa waxyeelo gaadhsiiyey dhinaca midig, oo gabi ahaanba mayd ah, hadalkiisa ayaan waxba laga garan karin kolka uu hadlayo, xaaladiisa kale way degan tahay in kasta oo ay takhaatiirtu sheegeen da,adiisa darteed way adag tahay in uu caadi ku soo noqdo, waase suurto gala in uu mudo noolaado.
Hadaba, tan iyo intii uu yimid dalka Ingriiska ayey qoyskiisu qarinayeen xaaladiisa caafimaad iyada oo aan la garanaynin sababta ay qarsoodiga uga dhigeen. Ma jiraan cid aragtay Jwxo-shiil tan iyo intii uu tagay dalka Ingriiska, waxaana ay qoysku ku gaabsadaan kolka la waydiiyo wuu hurdaa ama wuu maqan yahay ee maxaanu u sheegnaa, way adag tahay in wax war ah laga helo qoyska Jwxo-shiil, taas oo ay ugu wacan tahay hab dhaqanka nololeed ee qoyska.
Jwxo-shiil, oo ah nin da,a ah ayaa hore waaxaa uu u qabay cudurada macaanka iyo dhiig karka, waxaana uu muddo dheer qaadan jiray dawooyin ka caawin kara xanuunadan, sida ay sheegeen warar hoose waxaa uu soo sheegay intii uu joogay gudaha Ogadeeniya in uu ka bogsaday cudurkii macaanka oo uusan wax dawo ah qaadan muddo.
Waxaan jirin cid ka tirsan Kooxdiisa oo soo booqatay marka laga reebo Macalin Diirane oo arkay, noola sheegay in uusan ka hadlin caafimaadka Jwxo-shiil. Kooxda Jwxo-shiil oo aad u kala daadsan ayaan la ogayn waxa ay ka yeeli doonto xaalada qalafsan ee uu ku jiri Jwxo-shiil, in kasta oo uu wakiishay Jwxo-shiil Cabdulahi Mukhtaar Aw Xuseen, hadan si buuxda ma uusan u odhanin waxaa xilka sii haynaya hebel. Waxaana soo yeedhaysa amar diido badan, kol uu damcay Cabdulahi Mukhtaar in ay kulanto kooxdu si ay uga wada xaajoodaan, dhibaatooyin badan oo kooxda soo food saaray oo ku saabsan dilkii ay kooxdu u gaysatay Maxamed Sahal, booqashadii Masuuliyiinta Kaalinka 5aad iyo waliba xaalada Caafimaad xumo ee Jwxo-shiil, codsiga ina Aw Xuseen dhagaha ayey kooxdu ka furaysatay.
Ina Dhuubo, ayaa isagu iska dhiibay dalka Australia, halkaas oo ay hoysiisay garoob reer koonfureed ah, halkaas oo la filayo in uu Ina Dhuubo ku jiri doono xero qaxooti [refugee camp], inta uu uga bislaanayo sharciga ay islaantu siinayso muddo 5 sano ah.
Wixii war ka soo kordha xaalada caafimaad ee Jwxo-shiil dib ayaanu idin kala soo socod siin doonaa anaga oo leh wixii roon Rabow reeb.